Lohan'i India "Granat" - Moi Mili
Home > Headband Indiana "Granat"
Headband Indiana "Granat"
Ny tarika Indiana tany am-boalohany, Moimili "Granat" dia ravaka iray izay mety ho fanomezana mahafinaritra ny zanakao. Izy io dia ampiasaina amin'ny filalaovana ao an-trano sy ho toy ny props amin'ny fampisehoana an-tsekoly. Izy io dia vita amin'ny tanana tanteraka amin'ny lamba voajanahary. Mety ho an'ny ankizilahy sy vavy.
Saron-doha sy tazomoka tsara ny fehiloha Indiana. Ny volom-borona tsirairay dia voarangotra tamin'ny tanana, ary ny haingo rehetra dia voaravaka fehin-kibo sy pompon. Ny saron-dakan'i Moi Mili dia ilaina ho an'ny fety, fety akanjo, fotoam-pivoriana na ho toy ny bika amin'ny fampisehoana. Ny tarika elastika dia narafitra an-damosina nanitsy ny haben'ny tarika teo anelanelan'ny 50-56 cm.
Fitaovana: landihazo, malefaka, fety karnaval, lamba landy, tena ratsy indrindra, pompon tass, kindertag